Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Iindaba eziziiNdaba zokuHamba » Abaveleli bajongene nezithintelo zokuhamba ezintsha eHawaii
Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba Eziphambili zaseHawaii • Iindaba zeMpilo • Icandelo lokungenisa izihambi • iindaba • Safety • Shopping • Tourism • Intetho yezoKhenketho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba zase-USA ezaphulayo
Enye yezona ndawo zixakekileyo zokuhamba kunye nezokhenketho eUnited States yiHawaii, eyaziwa njenge Aloha Urhulumente. Ngokusondela kuma-30,000 abafika mihla le, iihotele zigcwele kwaye izifo ze-COVID-19 zisasazeka ngendlela engazange ibekho ngaphambili.
Izithintelo zokuhamba ezintsha eHawaii (zihlaziyiwe)
IHawaii iye yahamba ngamanani ayo aphezulu osulelo lwe-COVID okoko kwaqala ubhubhane. Eli nani liphezulu liyilahleko yokuba i-60.8% yabemi bakarhulumente bagonywe ngokupheleleyo.
Amanani arekhodiweyo abatyeleli basekhaya afika yonke imihla kwi Aloha State, ukugcina iihotele, iivenkile kunye neeresityu zigcwele.
Kutheni le nto abantu abaninzi befuna ukutyelela iHawaii. Nokuba iGunya lezoKhenketho eHawaii alazi kwaye lihlala lithule, lizama ukufumana iindlela zokudimaza abakhenkethi ukuba baye kulo Aloha Isizwe.
CAmanqanaba osulelo lwe-OVID okwangoku ngaphandle kolawulo kwi-US State yaseHawaii-kwaye oku kuyakhathaza.
"Kufuneka silinciphise inani lethu lamatyala ngoku ngoSuku lwaBasebenzi, kungenjalo kuya kubakho ukulahleka okungafunekiyo kunye nobubi bokuphila," utshilo uGreen kwincwadi ebhalwe kuFacebook naku-Instagram ngale ntsasa.
U-Lt. Irhuluneli uGreen uqinisekisiwe yiRhuluneli yaseHawaii uDavid Ige owabonisa ukuba ukuphinda kuziswe izithintelo kunokuba semgodini. Uthe isibhengezo sinokwenziwa ngolwesiHlanu. EIzithintelo ezilindelekileyo zinokwehlisa inani labantu abavunyelweyo ukudibana, kwimisitho, ukuxhoma elunxwemeni, iivenkile zokutyela kunye neevenkile.
Kwimeko embi kakhulu, inokunyanzela iindawo ukuba ziphinde zivale kwakhona.
Cofa apha yohlaziyo kunye nokufunda into egqitywe yiRhuluneli u-Ige kunye namanyathelo akhoyo okwehlisa ubalo lwentsholongwane.
Ezi ziindaba ezimbi kwishishini lezokhenketho eliqhubela phambili ngoku kuRhulumente. Ngelixa kuvaliwe ukhenketho lwamazwe aphesheya, ukhenketho lwasekhaya beluphezulu ngoku xa kuthelekiswa neenombolo zangaphambi kwesivuno.
Nokuba kukho ukwanda okukhulu kwamanani osulelo, inqanaba lokufa belisezantsi ukuza kuthi ga ngoku.
NgeCawa kusweleke umntu omnye kwaye kwarekhodwa amatyala angama-437, kwaye abantu abali-9 ngaphezulu balaliswa esibhedlele bezisa isibalo sokulaliswa saya kuma-2848.
Isishwankathelo sokugonya seHawaii COVID-19 samva nje sithi iidosi zokugonya ezili-1,784,678 ziye zenziwa ngeenkqubo zikarhulumente nezokuhambisa ukusukela ngeCawa, ukuya kuthi ga kwi-10,118 ukusuka ngoLwesihlanu. Amagosa ezempilo athi i-60.8% yabemi bakarhulumente ngoku bagonywe ngokupheleleyo, kwaye i-68.3% ifumene idosi enye ubuncinci.
Iindwendwe kufuneka zigqithise Inkqubo yoKhuseleko oluKhuselekileyo ngaphambi kokuba bavunyelwe ukungena eHawaii.
UHarlan Accola uthi:
Agasti 22, 2021 kwi-07: 41
Ke unepateni efanayo yosulelo njengeTexas eyahluke kakhulu ekutshixeni nasekufihleni- ke ucinga ukuba kuya kwenza umahluko xa uqala ukuba ngqongqo ngakumbi? Mhlawumbi umntu kufuneka aqonde isayensi. Sisecicini lokurhoxisa uhambo olukhulu losapho ngoJanuwari ukuya eHawaii- Oko kuyakuba ngaphezulu kwama-20,000 XNUMX kuqoqosho lwasekhaya- uyazibuza ukuba bangaphi abanye abantu abacinga into enye?
UKimberly Mele uthi:
Agasti 13, 2021 kwi-00: 20
Masibuyele etafileni sonke kwaye sithathe isigqibo sisonke ukuze sibuyele ekuhlambeni izandla, nasekucoceni kodwa nangakumbi, sithathe amanyathelo okhuseleko ngakumbi kunye nokugcina umgama. Kuyinyani ukuba uqaphele: fumana imifuno engaphezulu kunye namayeza kunye neziqholo kukutya, ungene elangeni kwaye wenze imithambo. Gcina omnye komnye emithandazweni, kwaye masibuyele ubomi bethu kuThixo simhloniphe ngokupheleleyo ukuba ungubani kwaye sibuze uThixo othumele UNYANA WAKHE UYESU ukuba asifele, asisindise nathi. Ukuba besinokuze sizithobe phambi kwakhe, sibuye kwiindlela zethu ezikhokeleyo size sifune ubuso bakhe, uya kuva esezulwini kwaye axolele izono zethu aphilise imihlaba yethu. Umntu unendima enkulu ayidlalayo kubunye bukaThixo. UThixo akusikelele iMelika ~ eHawaii kunye nazo zonke iindawo zomhlaba.
Masilwe ngoku kunye✓!
UAlla Bugriyev uthi:
Agasti 12, 2021 kwi-08: 27
Uthintelo alunakunceda. IHawaii ivaliwe iinyanga ezininzi kwaye intsholongwane isaphila. Kuyafana nezinye iintsholongwane. Inaliti okanye imaski ayinakukuthintela ekuguleni, ukutya ukutya okusempilweni nokwenza imithambo kuya kwenza umsebenzi ongcono… kodwa ukuba yinyani, iintsuku zakho zibaliwe nguThixo, Akukho namnye onokwandisa ubomi babo. Ulawula kwaye akukho nonwele oluwe entloko ngaphandle kwemvume yakhe.
Agasti 12, 2021 kwi-08: 19
Ngokusekwe kwidatha, kukuqonda kwam ispike kumatyala e-Covid ikakhulu ngenxa yokuba abahlali baseHawaii behamba kwaye beyicoca ekhaya.
Agasti 12, 2021 kwi-08: 14
@ Debby - Hlala eMelika ?! Ukugqibela kwam ukujonga, iHawaii yiMelika.
«Ngaphambilini 1 2 3